Ntinye DMP: Azụmaahịa Akpadoro Azụmaahịa Maka Ndị Nkwusa | Martech Zone
Mmekọrịta DMP: Business-Driven Business for Publishers
Fraịdee, June 12, 2020 Fraịdee, June 12, 2020 Elena Podshuveit
Mbelata nke ukwuu na nnweta data nke ndị ọzọ pụtara obere ohere maka ịkpa àgwà na mbelata na ego mgbasa ozi maka ọtụtụ ndị nwe ụlọ mgbasa ozi. Iji mezie mmefu ahụ, ndị nkwusa kwesịrị iche echiche banyere ụzọ ọhụrụ esi abịakwute data onye ọrụ. Kpọ ikpo okwu nchịkwa data nwere ike ịbụ ụzọ mgbapụ.
N'ime afọ abụọ sochirinụ, ahịa mgbasa ozi ga-ewepụ kuki ndị ọzọ, nke ga-agbanwe usoro ọdịnala nke ịchekwa ndị ọrụ, ijikwa oghere ad, yana mkpọsa nyocha.
Na weebụ, òkè ndị ọrụ akọwapụtara site na kuki ndị ọzọ ga-agbago na efu. Thedị ọdịnala nke nchọgharị na saịtị nchọgharị site na ndị na-eweta data ndị ọzọ na ndị na-ere ahịa ga-adị n'oge ochie. Ya mere, mkpa nke data nke mbụ ga-ebili. Ndị nkwusa na-enweghị ike nchịkọta data nke ha ga-enweta nnukwu ndozi, ebe azụmaahịa na-anakọta ngalaba ndị ọrụ ha nọ n'ọnọdụ pụrụ iche iji nweta ụgwọ ọrụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ a.
Nakọta na ijikwa data nke mbụ na-emepụta ohere pụrụ iche maka ndị nkwusa na ịkwalite ego ha, melite ahụmịhe ọdịnaya, itinye aka, na iwulite ndị na-eso ụzọ. Enwere ike iji data nke mbụ mee ihe maka ịhazi ọdịnaya na ịhazi ozi mgbasa ozi maka mgbasa ozi nke weebụsaịtị.
Business Insider na-eji data omume iji zụlite profaịlụ nke ndị na-agụ ya wee jiri ozi ahụ iji hazie akwụkwọ akụkọ email na ntinye akwụkwọ nke ọdịnaya iji mee ka ndị na-agụ ya ka mma. Mgbalị ndị a mere ka ọnụ ọgụgụ mgbasa ozi ha site na 60% mụbaa ma bulie ọnụego pịa na akwụkwọ akụkọ email ha site na 150%.
Ihe Mere Ndị Nkwusa Ji Chọrọ DMP
Dabere na Admixer ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ, ná nkezi, 12% nke mmefu ego nke mgbasa ozi na-emefu n'ị nweta data nke mbụ maka ndị na-ege ntị. Site na mkpochapu kuki ndị ọzọ, ọchịchọ maka data ga-abawanye ụba, ndị mbipụta na-anakọta data nke mbụ nọ n'ọnọdụ dị mma iji rite uru.
Ma, ha ga-achọ a pụrụ ịdabere na ya nhazi usoro njikwa data (DMP) iji mezue usoro azụmaahịa ebugharị data. DMP ga-enye ha ohere ịbubata, bupu, nyochaa, ma, n'ikpeazụ, nyochaa data ahụ. Ihe ndozi nke mbu nwere ike ime ka onu ogugu ad ma nye uzo ozo nke ego.
DMP Jiri Ile: Simpals
Simpals bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị n'ịntanetị na Moldova. Na ọchụchọ maka iyi ọhụrụ ha ga - enweta, ha soro DMP soro ịtọlite ​​nnakọta data nke mbụ na nchịkọta onye ọrụ maka 999.md, usoro ikpo okwu e-commerce nke Moldavian. N'ihi ya, ha kọwapụtara ngalaba 500 ndị na-ege ntị ma na-ere ha na mmemme na ndị mgbasa ozi site na DMP.
Iji DMP na-enye ọkwa data ọzọ maka ndị mgbasa ozi, ebe ha na-akwalite ogo na CPM nke echiche enyere. Data bụ ọlaedo ọhụrụ. Ka anyị tụlee akụkụ bụ isi nke ịhazi data ndị bipụtara na ịhọrọ onye na-eweta teknụzụ nke nwere ike ịkwado mkpa azụmahịa nke ụdị ndị mbipụta dị iche iche.
Etu esi akwadebe maka Mwepu DMP?
Nchịkọta data - Nke mbụ, ndị nkwusa kwesịrị iji nlezianya nyochaa nchịkọta data niile na nyiwe ha. Nke a gụnyere ndebanye aha na weebụsaịtị na ngwa mkpanaka, ntinye aka na netwọk Wi-Fi, yana ọnọdụ ọ bụla ọzọ ebe a gbara ndị ọrụ ume ịhapụ data nkeonwe. N'agbanyeghi ebe data si bia, nchikota ya na ebe nchekwa ya kwesiri ime ihe banyere iwu nke GDPR na CCPA. Oge ọ bụla ndị nkwusa chịkọtara ozi nkeonwe, ọ dị ha mkpa ịnweta nkwenye ndị ọrụ, ma hapụ ha ka ha nwee ike ịpụ.
Nhazi data - Tupu ịbanye DMP, ịkwesịrị ịhazi data gị niile, mee ka ọ gbanwee n'otu usoro, ma wepu oyiri. Iji tọọ usoro edo edo maka data, ọ dị oke mkpa ịhọrọ otu ihe nchọpụta pụrụ iche, dabere na nke ị ga-ahazi nchekwa data gị. Họrọ nke nwere ike mfe ịmata onye ọrụ, dị ka nọmba ekwentị ma ọ bụ email. Ọ ga-emekwa ka njikọta dị nfe ma ọ bụrụ na ị kewaa data gị n'ime ngalaba dịka ndị na-eme ihe kacha mma.
Etu esi etinye DMP?
Otu n'ime ụzọ kachasị dị mma iji jikọta DMP bụ jikọta ya na CRM site na API, mmekọrịta UniqueIDs. Ọ bụrụ na ejikọtara CRM gị na akụ gị dijitalụ niile, ọ nwere ike ịnyefe data na akpaghị aka na DMP, nke nwere ike ime ka ọ baawanye ma melite ya.
DMP anaghị edebe ozi nke njirimara ndị ọrụ. Mgbe etinyere DMP site na API ma ọ bụ mbubata faịlụ, ọ na-enweta ngwugwu data nke na-ejikọ ID onye mbipụta ya na njirimara njirimara pụrụ iche ị kọwara na usoro mbu.
Banyere mwekota site na CRM, ị nwere ike ịnyefe data na usoro a na-agba ọsọ. DMP enweghị ike itapia data a, ma jikwaa ya na usoro ezoro ezo. DMP na - achota nzuzo na nchekwa nke data onye ọrụ, ọ bụrụhaala na i mejuputara ozi nzuzo na ezoro ezo.
Kedu ọrụ DMP kwesịrị inwe?
Iji họrọ DMP kachasị mma maka azụmahịa gị, ịkwesịrị ịkọwapụta ihe ị chọrọ maka ndị na-eweta teknụzụ. Nke kachasị mkpa, ịkwesịrị ịdepụta njikọta teknụzụ niile dị mkpa.
DMP ekwesịghị ịkpaghasị usoro gị ma chọọ ịrụ ọrụ na akụrụngwa akụrụngwa dị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na inweela ikpo okwu CRM, CMS, yana njikọta ya na ndị mmekọ chọrọ, DMP ahọpụtara kwesịrị ịbụ ihe dabara na ha niile.
Mgbe ị na-ahọrọ DMP, chee echiche banyere ikike ọ bụla nwere na teknụzụ, ka njikọta ghara ịbụ ibu arọ nye ndị ọrụ aka gị. Kwesiri ikpo okwu nke ga - enyefe ọrụ igodo nke ọma: nchịkọta, nkewa, nyocha na monetization nke data.
Onye njikwa Tag - Mgbe ijikọ data gị dị na DMP gị, ị ga-anakọta isi data data. Iji mee nke ahụ, ịkwesịrị ịtọ mkpado ma ọ bụ pikselụ na weebụsaịtị gị. Ndị a bụ ụdọ koodu na-anakọta data gbasara omume onye ọrụ na nyiwe gị wee dekọọ ha na DMP. Ọ bụrụ na nke ikpeazụ nwere a njikwa njikwa, ọ ga-enwe ike aka na mkpado na gị nyiwe centrally. Ọ bụ ezie na ịnwere nhọrọ, ọ ga-echekwa ndị ọrụ teknụzụ gị ọtụtụ oge na mbọ.
Nkewa na Taxtụ - DMP gị kwesịrị inwe ọtụtụ atụmatụ maka nkewa data na nyocha. Ọ ghaghị inwe ike ịmepụta taxonomy, usoro data dịka usoro nke na-akọwa mmekọrịta dị n'etiti ngalaba data gị. Ọ ga - ekwe ka DMP kọwaa ọbụna mpempe data pere mpe, nyochaa ha nke ọma, ma were ha dị elu.
Njikọ CMS - Njirimara di elu karia nke DMP bu ikike ichikota ya na CMS gi webusaiti. Ọ ga - enyere gị aka ịmegharị ọdịnaya gị na websaịtị gị nke ọma wee gboo mkpa nke ndị ọrụ gị.
monetization - Mgbe ijikọchara DMP, ị ga - amụta etu esi arụ ọrụ data maka itinye ego na ntinye na ntanetị (DSP). Ọ dị mkpa ịhọrọ DMP nke enwere ike ijikọta ya na ndị mmekọ gị.
Fọdụ DSP na-enye ụmụ amaala DMP, nke etinyere n'ime usoro okike ha. Ọ dị mkpa iburu n'uche na DMP etinyere n'ime otu DSP nwere ike ịbụ azịza dị irè, dabere na ọnọdụ dị n'ahịa gị na asọmpi mpi.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'obere ahịa, ebe otu DSP bụ otu ọkpụkpọ kachasị, iji DMP ala ha nwere ike ịbụ ihe amamihe dị na ya. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na nnukwu ahịa, ịkwesịrị ị attentiona ntị na otu DMP nwere ike isi tinye ọnụ na isi ihe ntanetị.
Mwekota ihe nkesa na ad - Ihe ọzọ dị mkpa bụ ikike iji data nke gị. Imirikiti ndị nkwusa na-eji sava mgbasa ozi iji rụọ ọrụ ozugbo na ụlọ ọrụ na ndị mgbasa ozi, wepụta mkpọsa mgbasa ha, kwalite-kwalite, ma ọ bụ ree ahịa fọdụrụnụ. Yabụ, DMP gị chọrọ ka ijikọta na sava mgbasa ozi gị ngwa ngwa.
Dị ka o kwesịrị, sava mgbasa ozi gị kwesịrị ijikwa akụ mgbasa ozi na nyiwe gị niile (weebụsaịtị, ngwa mkpanaka, wdg) ma gbanwee data gị na CRM gị, nke ga-ekwupụta ya na DMP. Dị dị otu a nwere ike ịbelata njikọta mgbasa ozi gị niile ma mee ka ị mata otu esi enweta ego. Agbanyeghị, nke a abụghị mgbe niile, ị kwesịrị ijide n'aka na DMP na-arụ ọrụ nke ọma na sava mgbasa ozi gị.
Ọ dị oke mkpa na onye na-ahụ maka teknụzụ ị họọrọ na-agbaso iwu nzuzo na nchekwa data zuru ụwa ọnụ. Ọbụlagodi na ị na-elekwasị anya naanị na data sitere na ahịa mpaghara, ị ka nwere ike ịnweta ndị ọrụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle bụ mmekọrịta nke onye ọrụ DMP na ndị mgbasa ozi obodo na ndị mmekọ. Banye na akụrụngwa dị n'otu na mmekọrịta mmekọrịta nwere ike belata njikọta nke nyiwe gị ma mee ka ego nke akụ dijitalụ gị dịkwuo mma.
Ọ dịkwa oke mkpa ịhọrọ onye na-ahụ maka teknụzụ ọ bụghị naanị na-enye gị interface ọrụ onwe gị ma na-enyekwa gị nduzi bara uru, nzaghachi, yana ndụmọdụ. Nlekọta ndị nlekọta kachasị elu bụ ihe dị mkpa iji dozie nsogbu ọ bụla ma dozie usoro njikwa data gị.
Tags: mmmmmmmmmmmmmmgbasa ozinchọgharị na saịtịnjikwa mmekọrịta ndị ahịanchịkọta dataike ọdịnaya njikarịchadata nke mbụmonetizationozi ịntanetị nkeonweezubere icheụtụ ụtụdata nke atọ
Elena Podshuveit bụ onye isi ndị ahịa na Admixer. O nwere ihe karịrị afọ 15 nke nlekọta na njikwa ọrụ dijitalụ. Kemgbe 2016, ọ bụ ọrụ maka akara ngwaahịa Admixer SaaS. Pọtụfoliyo Elena gụnyere mmalite mmalite nke ọma, ọrụ maka ndị mgbasa ozi kachasị elu (Philips, Nestle, Ferrero Rocher, Kimberly-Clark, Danone, Sanofi), azịza SaaS, mmalite nke ọnụ ụzọ ntanetị na ngwa mkpanaka. Elena nyochara nnukwu ụlọ mbipụta akwụkwọ na ntinye akwụkwọ na itinye ego nke akụ ha.